Igbo, John: Lesson 034 - Ịgwọ onye ọrịa ahụ na Bethesda (Jọn 5:1-16) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 034 (Healing of the paralytic)
1. Ịgwọ onye ọrịa ahụ na Bethesda (Jọn 5:1-16)
10 Ya mere ndi-Juu siri onye ahu emere ka aru di ya ike, Ọ bu Sab. O wee sị ha: "Onye ahụ nke mere ka ahụ dị m mma, otu onye ahụ gwara m, sị, 'Kpọọ ihe ndina gị wee jee ije.'" 12 Ha wee jụọ ya, sị: Ònye bu nwoke ahu nke siri gi, Chiri ute-gi, je ije? 13Ma onye ahu emere ka aru di ya ike amaghi onye ọ bu, n'ihi na Jisus esiwo n'ebe ahu pua, ìgwè madu we nọ n'ebe ahu.
Ndị na-anọ n'èzí dị na Bethesda nwere obi ụtọ, ma e wezụga ndị nhazi iwu. Ndị a buru ibu na-enwere anyaụfụ, karịsịa dị ka ọgwụgwọ mere n'ụbọchị izu ike. Ọ bụghị nanị na Jizọs gwọrọ onye ahụ na-adịghị mma, kama o nyekwara ya iwu ka ọ buru ihe ndina ya n'akụkụ okporo ụzọ obodo ahụ. Nke a ka ha chere na ọ bụ mmehie megide Chineke na iwu Ụbọchị Izu Ike, mgbe ọrụ niile kwụsịrị n'ụbọchị izu ike. Onye obula n'emebi iwu a kwesiri onwu (onugugu 15: 32-36). Ndi Ju kwubiri na Mesaịa ahu agagh abia, ma oburu na mba ahu nile n'eme ka ubochi Sabbath guzosie ike.
Ndi Juu a agaghi eji nkume to nwoke ah naebu ihe ndina ya n'ebe ah, n'ihi na a ghaghi ido akanánti tupu ekwueokwu ah; ebubo a bu ihe egwu. Nwoke ahụ a gwọrọ na-agbachitere onwe ya site n'ikwu banyere iwu Jizọs maka ibu ihe ndina ahụ bụ ọnọdụ maka ọgwụgwọ zuru ezu.
Ndị na-ede iwu na-ewe oké iwe, obi adịghịkwa ha ụtọ na ha na-agwọ ọrịa, ma ha aghọtaghị ikike ịhụnanya Jizọs gosipụtara na ọgwụgwọ ahụ. Ha malitere iji anyaụfụ na ịkpọ onye na-agwọ ọrịa asị na Ọ ghaghị inye iwu ka onye ahụ na-adịghị ike buru ibu ya n'ụbọchị izu ike. N'ihi ya, Jizọs chere na ọ bụ onye mmehie kwesịrị ọnwụ.
Nwoke ahụ a gwọrọ amaghị onye na-agwọ ọrịa, ebe ọ bụ na Jizọs bụ onye bịara abịa. Nke a bụ nleta mbụ ya na Bethesda. Mgbe o gwusiri o yiri ka ọ ga-apụ. Jizos acho ghi okwukwe nime onwe ya idabere na] l ebube, kama n'ebe onye ah n'anya yano.
14 Mb͕e ahu Jizos chọtara Ya n'ulo uku Chineke, si Ya, Le, emewo ka aru di gi nma. Emehiela ọzọ, ka ihe ọ bụla ghara ịba gị ahụ. "15 Nwoke ahụ gara, gwa ndị Juu na ọ bụ Jizọs mere ka ahụ dị ya mma. 16 N'ihi nka ka ndi-Ju kpab͕uworo Jizos, ha we chọ uzọ ib͕u Ya, n'ihi na O mere ihe ndia n'ubọchi-izu-ike.
Jizos choro onye ahgworo gwo wee hu nwoke ah nime temple naeto Chineke. Ọ na-atụ ụjọ na ọṅụ n'otu oge ahụ mgbe ọ hụrụ Jizọs. Anyị maara ihe Jizọs gwara ya;
A gwọrọ gị. Rịba ama ihe dị ịtụnanya ị bịara gị n'ihi na ị nọ na-arịa ọrịa ruo afọ 38. Nke a bụ ihe Chineke na-eme, ọ bụghị omume mmadụ. Chineke nke nwere aru onwe ya meghere anya nke obi gi.
Ị mara mmehie gị. Ndụ na-enweghị Chineke kpatara ọdachi a. Site na m gwọọ gị, a gbagharawo mmehie gị nile. Maka ọgwụgwọ iji kpuchie obi ya, Jizọs gwara ya ka o rube isi ma ghara ime mmehie. Inweta mgbaghara chọrọ mkpebi ka ị ghara ịlaghachi n'otu mmehie ahụ. Onye nabatara okwu siri ike nke Kraist, ma chegharia na iru uju, nata ike Chineke, ma nwee ike imeri ihe ojo site n'enyemaka Chineke. Kraist adighi agwa ihe anyi na-achoghi ime, mana anyi na-enye anyi mmuo ahu maka ike ahu nwere ike imeri onwunwa anyi na umu anu anyi. Mmụọ nke eziokwu na-enyere anyị aka izere ma guzogide ihe ọjọọ.
Mgbe ụfọdụ, ọrịa na mmerụ bụ ịdọ aka ná ntị site na nchegbu ịhụnanya nke Chineke iji mee ka anyị laghachikwute Ya. Na oge ndị ọzọ, akụnụba na okomoko nwere ike ịghọ ntaramahụhụ Chineke maka nrụgide anyị n'ebe Chineke nọ. Mmadụ na-aghọ onye mmụọ ọjọọ, na-agwụ na njedebe ebighi ebi. Ejila mmehie mee ihe, ma kwenye na ị na-agbachitere otu mmebi, ma rịọ Kraịst ka ọ nwere onwe gị. Ekwela ka i guzo n'agbata Jizọs na mmehie gị. Kwụsie ike gị. Gwa Onye nzoputa gi na nkwa ma O ga-azoputa gi ruo n'ikpeazu.
Lee ihe ịtụnanya ọ bụ! Mgbe ha natasịrị ndụmọdụ site na Jizọs onye nwoke a gwọrọ gbagara ndị Juu, gwa ha na onye Nazaret ahụ gwọọ ya ma mee ka ọ 'kpafuo' site n'iwu nke Ụbọchị Izu Ike. Ndị na-ede iwu nwere ike ịtụ anya na ya ga-enyocha Jizọs ka o jide ya.
Mkpọasị nke ndị ụkọchukwu ahụ gosipụtara mgbe Jizọs mere ka ụlọ nsọ ahụ dị ọcha abụghị ihe dị egwu dị ka mmegide nke ndị Farisii megide Jizọs mgbe a gwọchara ya. Kraist agbaghawo 'ezi omume ha,' ma gosiputa na ezi omume adigh adi na idebe iwu site n'ebumnobi onwe onye. Chineke chọrọ ebere na ịhụnanya. Ịdị ọcha n'enweghị ịhụnanya bụ ụgha. Chineke na-achọ ebere n'ebe anyị nọ, ọ bụghị omenala. Obi dị m ụtọ na Chineke agbapụtala anyị n'aka ọtụtụ puku iwu iwu, na-enye anyị ịhụnanya dị ka iwu ahụ dum.
Gịnị mere ndị Juu ji kpagbuo Jizọs?